Egwu Archives - NDỊ IGBO KWENU
Home / Egwu
August 23, 2016	Egwu 0
King Pwest etiputago egwu ọhụrụ ọ kpọrọ “Ma City”. Egwu a n’akpọtu akpọtu. Ọ bụrụ na ị n’achọ egwu gị na ndị enyi gị ga eji n’enwe anuri, lee ya ebe a.. Kpọọ nkiri dị na mgbada ka ị nụrụ egwu a. King Pwest – Ma City
August 21, 2016	Egwu, Featured 0
Zoro Swagbag na Phyno emeputala egwu ọhụrụ ha kpọrọ “Achikolo”. Achikolo bu egwu ohuru n’ewu-ewu n’Ala-Igbo ugbua. Umuigbo-a n’abu n’acha ajo oku n’eziokwu. Otu Zoro Swagbag na Phyno fino si tukuọ aka jiri ogene, igba, ekwe na oja hazie egwu-a ga amasi gi. Oburu na i che na asusu igbo ...
August 15, 2016	Egwu 0
Santy emepụtala egwu ọhụrụ eji sooso asụsụ igbo hazie. Santy bu ezigbo nwaafo igbo bi na China. Ebeahu ka ọ nọ n’eti egwu ma n’akwalite asusu igbo. Ndimgbu bụ egwu ọhụrụ o tipụtara iji kọwaa ọtụtụ ihe n’eme n’ụwa. Otụ o si were ilu igbo hazie egwu-a ga amasị unu . ...
July 18, 2016	Egwu, Featured 0
Flavour N’abania, Zoro Swagbag na Phyno-Fino ha ato no n’ime ofu egwu-a. Onweghi onye kwesiri igwa gi na egwu-a yere eye. “Gbo Gan Gbom” bu Egwu igbo ohuru si n’aka 2nite Music Group puta. Chei! Umuigbo adighi achi ochi. Onye nyere aka meputa egwu-a bu Kezyklef. Gbo Gan Gbom – Flavour ft ...
May 5, 2016	Egwu, Egwu Ụka, Featured 0
N’ime ‘ghetto’ ndị mmadụ n’ekelekwa Chukwu abiama. Phyno na Olamide emeputala egwu ọhụrụ ha kpọrọ “Fada Fada (Ghetto Gospel). Ọ bụ eziokwu na e nweghị ịhụnanya ka ịhụnanya Chukwu nwere ebe umummadụ nọ. Ya mere Phyno na Olamide ji tiputa egwu ọhụrụ a ikele Chukwu nna. Fada fada – phyno ...
Odogwu – Samsong ft Chioma Jesus
April 1, 2016	Egwu Ụka 0
Samsong na Chioma Jesus achikọtala aka tiputa ofu egwu ụka ha kpọrọ “Odogwu”. muta otu e si guo ya ebe a “Odogwu na-agha Dike na-agha Nara ekele Okeosisi na enye ndu You are the tree of life Agam eburu alleluya eburu Para alleluya apara Odum Egbo Judah Okorobia di nma ...
Mama – Flavour N’abania ft Chidinma
April 1, 2016	Egwu, Featured 0
Flavour N’abania emeputala nkiri egwu ọhụrụ ya na Chidinma Ekile guru. Aha egwu a bu “Mama”. Ọ bụ eziokwu na e nweghị ịhụnanya dị ka ịhụnanya nne n’enye. Ya mere Flavour na Chidinma ji tiputa egwu ọhụrụ a ikele ndi nne.
All I Want Is You – Banky W ft Chidinma
“All I want is you” bụ aha egwu ihụnanya Banky W na Chidinma guru. I kirie nkiri a ị ga hụ ụdịrị nsogbo ọtụtụ umunwoke na umunwanyi n’agabiga n’obodo Naijiria. N’ime obodo a, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị si agbụrụ dị iche-iche n’epute nnukwu nsogbu n’ezinụlọ ụfọdụ. Banky W tiri egwu ...
Osinachi (Remix) – Humblesmith ft. Davido
Humblesmith emegharịgo egwu ya “Osinachi”. Unu ga echeta na nke mbu o tiri, ọ bụ ya na Phyno so guọ egwu a. Mana kita, ọ bụ ya na Davido guru Osinachi nke abuọ. Kirie nkiri ka i hu ihe eji asi na Igbo amaka.
Ogene – Zoro ft Flavour
Agụwa ndị egwu n’ewu-ewu n’ala igbo kita, onweghi ike ka agụpụ Zoro Swagbag. Zoro abiawo ọzọ, kita ọ bụ ya na Flavour chikọtara aka tiputa egwu a na kpọtu akpọtu.
April 11, 2016	23,167
May 10, 2016	5,387
May 6, 2016	3,174
May 5, 2016	3,058
August 23, 2016	2,850